မိမိ Facebook ကို Security Checkup လုပ်ဖို့ | Online Service Center Myanmar -->
မိမိ Facebook ကို Security Checkup လုပ်ဖို့
ဒီ တစ်ရက် နှစ်ရက် (7.2.2017 or 8.2.2017) အတွင်းမှာ အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေး တော်တော်များများဆီမှာ မြင်တွေ့နေရပြီထင်ပါတယ် တစ်ချို့ကလည်းလာမေးကြပါတယ် အစ်ကိုရေ Facebook မှာ အဲ့ဒီလိုကြီးပေါ်နေတယ် အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လို့လည်း Account များ မလုံခြုံတော့လို့လား Facebook က အဲ့ဒါကြောင့် သတိပေးတာလားဆိုပြီး လာမေးကြတယ်။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီမှာပြထားတဲ့စာလေးကို သေခြာဖတ်မကြည့်မိကြတဲ့အတွက် ဘာမှန်းမသိပဲစိုးရိမ်ကုန်ကြတာပါ အမှန်တကယ်က Facebook Team က “Facebook ပေါ်မှာ လုံလုံခြုံခြုံရှိနေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် ဒါကြောင့် သင့် Account ကို လုံခြုံအောင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်လို့ရတယ်(လုပ်ဆောင်ရမယ်) ဆိုတာတွေကို သိထားစေချင်ပါတယ်” ဆိုပြီးပြောထားတာပါ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး Security Checkup လုပ်နိုင်ဖို့ Link တွေပါ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
မျှားပြထားတဲ့နေရာကို Click နှိပ်ပါ။
ကဲ... ပထမဆုံးအနေနဲ့ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း မြင်တွေ့လာရပြီဆိုရင် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အနေနဲ့ ကျော်မသွားပဲ သူပြထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ် ဒါမှလည်း မိမိတို့ Facebook Account လေးတွေကို လုံလုံခြုံခြုံနဲ့သုံးစွဲနိုင်မှာ အခု ပထမဆုံး အပေါ်ဆုံးက ပုံအတိုင်းမြင်တွေ့ လာရပြီဆိုရင် Get Started ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ အောက်ပါ ပုံအတိုင်း Pop Up box လေး တက်လာပါလိမ့်မယ်။
Review Logins ဆိုတာလေးကို Click နှိပ်ပါ။
အထက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့လာရပြီဆိုပါလျှင် Review Logins ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ အဲ့ဒီမှာ မိမိ Account ကို Login ဝင်ထားတဲ့ Log လေးတွေကိုမြင်ရမှာပါ ( ဒါကတော့ သူက အလွယ်လုပ်ပေးထားတာပါ အတူတူပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ Account Settings => Security => Where You're Logged In ထဲကိုဝင်ပြီး အဲ့ဒီထဲကနေ လိုက်ဖျက်ထုတ်ရတာကို ပိုသဘောကျပါတယ် အဲ့ဒီထဲမှာဆို Computer နဲ့ကြည့်ရင် Location: Yangon ဘာညာ ပေါ်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင် IP တွေပြူနေအောင် ထွက်လာလို့ပါ ဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ရပါတယ် အဲ့ဒီပေါ်ကို ဖိလိုက်တာနဲ့ မိမိ အကောင့်ကို ဝင်ထားတဲ့ IP Log ကို မြင်တွေ့ရပါတယ် ) အောက်ပါ ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ မိမိ Account ထဲကိုဝင်ထားတဲ့ Log လေးတွေကို မြင်တွေ့ရပါမယ်။
စိတ်ချရအောင် Log Out of All လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အထက်ပါ ပုံထဲကအတိုင်း မြင်တွေ့လာရရင် သိတဲ့ Log ကို ချန်ထားချင်ရင် အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီး မသိတဲ့ Log ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Log Out of All လုပ်ပေးလိုက်ပါ ကိုယ်က ကိုယ့် Facebook Password ကို မှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့(တော်တော်များများက ကိုယ့် Password တောင် ကိုယ်မမှတ်မိတဲ့သူတွေများနေလို့ မှတ်မိရင်လို့ပြောတာ တော်ကြာမမှတ်မိပဲ Log Out of All လုပ်လိုက်ရင် ဒုက္ခတွေ ရောက်နေကြမှာစိုးလို့ :D ) စိတ်ချရအောင် Log Out of All လုပ်ပေးလိုက် တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
( ဒါက ဘာအတွက်လုပ်ရတာလည်းဆိုတော့ ကိုယ့် Facebook Account ကို အခြားတစ်ယောက်ယောက်က ဝင်သုံးနေရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က သူများဖုန်းတွေ ကွန်ပြူတာတွေထဲမှာ ဝင်သုံးခဲ့ဘူးပြီး မထွက်ခဲ့မိတာမျိုးတွေကို အလိုလျောက် Log Out ထွက်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ )
Manage Your Alerts ဆိုတာလေးကို Click နှိပ်ပေးပါ။
ဒါကတော့ နောက်တစ်ခုပါ အထက်ပါပုံထဲကအတိုင်း Manage Your Alerts ဆိုတာလေးကို Click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ အဲ့ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Turn On Alerts ဖြစ်နေလျှင် Turn Off Alerts ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
အထက်ပါပုံကို မြင်တွေ့ကြမှာပါ ဒီနေရာမှာ လုပ်စရာက ၃ ခုရှိပါတယ် ပထမတစ်ခုကတော့ Turn On Alerts ဖြစ်နေလျှင် Turn Off Alerts ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါမယ် ကျွန်တော်က On ထားပြီးသားမို့ Off ဆိုပြီး ပြနေတာပါ On မထားရသေးတဲ့သူတွေဆီမှာဆိုရင် Turn On Alerts ဆိုပြီး ပြနေပါလိမ့်မယ် အဲ့လို ပြနေရင် အဲ့ဒါလေးကို Click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ နောက်တစ်ခုက Get notifications နဲ့Email login alerts ဆိုတာလေး ၂ ခုမှာ အမှန်ခြစ်လေးတွေ ပေါ်အောင်ခြစ်ပေးပါ(ပုံထဲမှာခြစ်ပြထားပါတယ်)။
( ဒါက ဘာအတွက်လုပ်ရတာလည်းဆိုတော့ Get notifications ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားတဲ့အတွက် မိမိ Facebook Account ကို မိမိ အသုံးပြုနေစဉ်အချိန်မှာ အခြား တစ်နေရာရာကနေ တစ်ယောက်ယောက်က Login ဝင်လိုက်တာနဲ့ Noti မှာ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ် Devices ကနေ လှမ်းဝင်နေတယ်ဆိုပြီး သတိပေးစာ တက်လာမှာပါ Email login alerts မှာ အမှန်ခြစ်ပေးထားတဲ့အတွက် မိမိ အကောင့်ကို အခြား တစ်နေရာကနေ Login ဝင်တယ်ဆိုရင် Email ပေးပို့ပြီး အသိပေးသွားမှာပါ ကိုယ်က အဲ့ဒီ Email ထဲကနေ ကိုယ် ဝင်တာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သူပို့လာတဲ့ မေးလ်ထဲက Secure Your Account ဆိုတာလေးကနေ ဝင်ရောက်ပြီး အတည်ပြုပေးလို့ရပါတယ်။ )
Read Password Tips ဆိုတာလေးကို Click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
အပေါ်က ပုံအတိုင်း မြင်တွေ့လာရပြီဆိုပါလျှင် Read Password Tips ဆိုတာလေးကို Click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Password ချိန်းလိုပါက Change Password ကို နှိပ်ပြီးချိန်းပါ။
အပေါ်ကအတိုင်းမြင်တွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့Password နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောပေးထားခြင်းဖြစ် ပါတယ် ဘာတွေပြောထားတာလည်းဆိုတော့ “Password ခနခန ပြောင်းနေတာထက် အကောင်းဆုံး အဆင့်မြင့်မြင့် Password တစ်ခုကိုပေးထားအကောင်းဆုံးပါပဲ၊ Online ပေါ်က မည့်သည့်နေရာမဆို Facebook Password အတိုင်းမပေးမိပါစေနဲ့ Facebook Password ကိုအသုံးမပြုမိပါစေနဲ့( Phishing Website တွေ ဝင်မိရင်မိမိ Facebook ပါ Hacked လုပ္ခံရႏိုင္လုိ ့)၊ မိမိရဲ့Facebook Password ကို အခြား မည်သူ့ကိုမှပေးမသုံးပါနဲ့( ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပေးမသုံးဖို့ပြောထားတာပါ) မိမိ Password ကို မိမိ တစ်ယောက်ထဲပဲ သိထားဖို့လိုပါတယ်၊ Password ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူမပေးမိပါစေနဲ့( မိမိနာမည်၊ ချစ်သူနာမည်၊ မိဘအမည်၊ မွေးနေ့မွေးရက်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဂဏန်းအက္ခရာများကို အစဉ်အလိုက် ဥပမာ 123456 ပေးတာ၊ ခန့်မှန်းရလွယ်ကူနိုင်တဲ့ Password မျိုးမပြုလုပ်ပါနဲ့)” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိ Password ကို ဘယ်လိုပေးထားလည်းဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပါ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အရာတွေ ထဲကလို အလွယ်တကူပေးထားမိလား ပေးထားမိတယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန်မှ အဆင့်မြင့်ပြီး ခန့်မှန်းရ ခက်တဲ့ Password ကိုပေးဖို့အတွက် Change Password ကို နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ပြီး လက်ရှိ Password ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
ကဲ... ဒီလောက်ဆိုရင် ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အရာလေးကဘာလဲ...? ဘာလုပ်ရတာလဲ..? ဆိုပြီး လာမေးထားကြတဲ့သူတွေ အဲ့ဒါကို မြင်ပြီး ဘာမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ဒါလေးကိုဖတ်ပြီး သိရှိသွားကြပြီထင်ပါတယ် ဒါကြောင့်... ဒါလေးကိုဖတ်ပြီး သိရှိသွားကြပြီဆိုရင် ပြန်လည်ပြီးတော့ Share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦး။ ^_^
Aung Kyaw Soe ( 8.2.2017 - 3:18 PM )
( မိမိတို့ Facebook Account တွေကို လုံလုံခြုံခြုံအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Security Checkup လုပ်တာတွေ Security မြှင့်တင်တာ ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါလျှင် OSC-Myanmar ကေန Security Services တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ )